जनउत्थान सामुदायिकको नबिकेको हकप्रद लिलामीमा
भदौ ३, काठमाडौं (अस) । जनउत्थान सामुदायिक वित्तिय संस्था लिमिटेडले हकप्रद शेयरमा पूर्ण आवेदन नपरेपछि नबिकेको शेयर लिलामीमार्फत विक्री गर्न लागेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणतर्फको १८ हजार ५०३ कित्ता शेयर लिलामीमार्फत विक्रिमा ल्याउन लागेको हो । लिलामी शेयरमा आवेदन दिनको लागि भदौ १० गतेदेखि भदौ १७ गते...
माछापुच्छ्रे बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने मंगलवार अन्तिम दिन
भदौ ३, काठमाडौं (अस) । साउन ६ गतेदेखि विक्रीमा आएको माछापुच्छ्रे बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने मंगलवार (भदौ ३ गते) अन्तिम दिन रहेको छ । कम्पनीले आवेदन दिने छोटो अवधि साउन ९ गते तोकेपनि सो अवधिमा सबै ऋणपत्र खरीद नभएकाले भदौ ३ गतेसम्म मिति लम्ब्याएको हो । बैंकले ३० लाख कित्ता ऋणपत्र विक्...
समता माइक्रोफाइनान्सका सञ्चालक पौडेलको राजीनामा स्वीकृत
भदौ २, काठमाडौं । समता माइक्रोफाइनान्सले सञ्चालक सुवास पौडेलको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । पौडेलले साउन १ गते व्यक्तिगत कारण उल्लेख गरी दिएको राजीनामा साउन २७ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले स्वीकृत गरेको कम्पनीले नेप्सेमार्फत जानकारी दिएको हो । रिक्त पदपूर्ति आगामी साधारणसभाबाट गराउने कम्पनीको भनाइ...
वेष्ट फाइनान्सको चुक्तापूँजीमा १७२.२६ प्रतिशतले वृद्धि
भदौ २, काठमाडौं । वेष्ट फाइनान्सको चुक्तापूँजी रू. ८१ करोड १६ हजार चुक्तापूँजी पुगेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको आव २०७५/७६ को चौंथो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा १७२ दशमल २६ प्रतिशतले चुक्तापूँजी बढेको हो । अघिल्लो आव २०७४/७५ मा यो रकम रू. २९ करोड ७५ लाख १३ हजार थियो । कम्...
छिमेक लघुवित्तका सञ्चालक कार्कीको राजीनामा स्वीकृत
भदौ २, काठमाडौं । छिमेक लघुवित्तले सञ्चालक रेणु कार्कीको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । कम्पनीको भदौ १ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले सोही दिनदेखि लागू हुनेगरी कार्कीको राजीनामा स्वीकृत गरेको जानकारी नेप्सेमा दिएको हो । विश्वमित्र श्रेष्ठको अध्यक्षतामा छिमेक लघुवित्तमा सात सदस्यीय सञ्चालक समिति रहेको छ...
नागबेली लघुवित्तले गर्‍यो लाभांश प्रस्ताव, बोनससँगै नगद पनि
भदौ २, काठमाडौं । नागबेली लघुवित्तले गत आव २०७५/७६ को वितरणयोग्य मुनाफाबाट लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले २६ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनका लागि १ दशमलव ३६८ प्रतिशत गरी कुल २७ दशमलव ३६८ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पश्चात आगामी साधारण सभाले प...
नेप्सेमा देखियो सुधार, परिसूचक ७.२३ अंकले बढ्यो, कारोबार रकम १८.२४ प्रतिशतले वृद्धि
भदौ २, काठमाडौं । भदौ महीनाको दोस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचकमा सुधार देखिएको छ । आइतवारसम्म घटेर कारोबार भइरहेको नेप्से परिसूचक सोमवार ७ दशमलव २३ अंक बढेर १ हजार २२२ दशमलव शून्य ६ विन्दुमा बन्द भएको छ । यस दिन १ हजार २१४ दशमलव ९६ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक कारोबारको पहिलो घण्टाको अवधिसम्म घटेर १...
जनरल इन्स्योरेन्सद्वारा ११ गुणा बढी बीमाशुल्क आर्जन, जगेडा १७२ प्रतिशतले बढ्यो
भदौ २, काठमाडौं (अस) । जनरल इन्स्यारेन्सले गत आर्थिक वर्षको चौंथो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार कम्पनीले गत आवमा रू. ३३ करोड २४ लाख ६१ हजार बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । बीमाशुल्क रकम अघिल्लो वर्षभन्दा ११ गुणा बढी भएको छ । यो रकम अघिल्लो वर्ष रू. १ करोड ३ लाख ८८ हजार थ...
नेको इन्स्योरेन्सले कमायो ३४ करोडभन्दा बढी नाफा
भदौ २, काठमाडौं (अस) । नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आव २०७५/७६ मा रू. ३४ करोड ३६ लाख खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा अघिल्लो आव २०७४/७५ मा रू. ३० करोड २४ लाख थियो । अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष १३ दशमलव ६२ प्रतिशतले नाफा बढेको हो । गत वर्ष कम्पनीले रू. १ अर्ब ९१ करोड ६२ लाख बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ...
१२१९.२४ विन्दुमा परिसूचक (२ बजेको अपडेट)
भदौ २, काठमाडौं (अस) । सोमवार नेप्से कारोबार भएको तेस्रो घण्टामा ४ दशमलव ४१ अंक बढेर १ हजार २१९ दशमलव २४ विन्दुमा पुगेको छ । १ हजार २१४ दशमलव ९६ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक कारोबारको तेस्रो घण्टामा शून्य दशमलव ३६ प्रतिशत बढेको हो । सोमवार तेस्रो घण्टासम्म कारोबारमा आएका १७१ कम्पनीको रू. २९...